Olee otú tinye music / songs ka iMovie on Mac / iPhone / iPad
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe ụzọ na ike ike iji mee ka n'ihu na ndị ọzọ a na-arụ iMovie dị ka otu n'ime ihe kasị mma. Agbakwụnye songs na vidiyo na ndị ọzọ na mmetụta ka iMovie metụtara oru ngo bụghị a siri ike a ọrụ mgbe niile. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na n'ozuzu Filiks na e kwuru na a nkuzi e soro na zuru iji jide n'aka na ihe ga-esi bụ ihe na dị na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. The iji na-na-na-otu na-mma ịgbaso.
Part 1: The iMovie akwado music formats
Part 2: Olee ịgbakwunye music / songs ka iMovie on Mac
Nkebi nke 3: Olee otú iji tinye music / songs ka iMovie on iPhone / iPad
Nkebi nke 4: Olee ịgbakwunye music / songs si videos
N'okpuru ebe a bụ tebụl nke ga-eme ka ihe doo anya n'ihi na onye ọrụ ma ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà pụta na-eme enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na nke. Ọ na-na-kwuru na ndị a bụ naanị formats na-akwado site na iMovie:
Ọ na-emekwa n'aka na mp4 ma ọ bụ MPEG-4 akụkụ 14 e akwado. Ọ na-echekwa ma na-akwado ka oyiyi na ndepụta okwu. Ọ bụ ihe kasị mma video usoro maka iMovie na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nta faịlụ nha na-na-akwado nke na-eme ya a na-ewuli elu ngwugwu.
The format nwere otu ma ọ bụ karịa egwu na onye ọ bụla e agbakwunyere na data nke dị iche iche obiọma. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na data ụdị-akwado site na a Ọkpụkpọ bụ audio, video, ederede na mmetụta.
Ọ na-amara dị ka H.222 ma ọ bụ H.262 dị ka Itu ka kọwaa ya. Ọ dabeere na isi nke kasị TV na DVD formats na-awa site na ọwa na nke a.
Makwaara dị ka camcorder format ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu formats mepụtara Sony na Panasonic ikpokọta. Ọ na-akwado elu mkpebi faịlụ na nwere faịlụ ụdị na-achọ dịtụ nnukwu size.
/ Ọ bụ a format na e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe format na nke a. Ọ bụ uncompressed na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma format a na-eji inweta ihe kasị mma nke iMovie arụmọrụ.
Usoro dị nnọọ mfe na-eso na ndị na-esonụ bụ nzọụkwụ ndị a ga-soro na nke a iji jide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe Filiks na-soro na nke a. Ọ ga-eduga needful n'ime chaachaa:
Ihe omume ahụ bụ a ga-emeghe iji malite usoro:
Ngo bụ mgbe ahụ ka a ga-emeghe n'ihu n'ihu na nke a:
Ọdịyo button na n'elu bụ mgbe ahụ na-enwe iji jide n'aka na usoro ọganihu na kasị mma n'ụzọ na kwa na nke kacha mma pụta. Ọ bụ otu n'ime ndị na buttons on iMovie interface na bụ mgbe ụfọdụ siri ike ịhụ otú na a nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma pụta na-enweta site na-esonụ foto n'okpuru:
The song a na-ahụ na-kwukwara dị ka kwa ina na mkpa nke oru ngo dị ka ọ ga anya ọma. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na akụkụ nile nke song na-nọgidere na-enwe na nyochaa enweghị ihe ọ bụla nke:
5. The song a na-ahụ na-dọkpụụrụ na kwukwara iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta e site na nke a:
Otu iMovie ngwa n'ihi na iOS nwekwara e mepụtara dị ka ọ bụ a ma ama eziokwu na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro na nke a itienede iji nweta ihe kasị mma nke ngwa na site na-agbakwụnye achọrọ songs na mmetụta dị ka mkpa. Na-esonụ bụ nzọụkwụ ndị a ga-soro na nke a ga-esi na ya pụta dị ka kwa na-atụ anya na ndị magburu onwe mmetụta:
Ngo bụ ka a ga-emeghe ebe music mgbakwunye, a ga-mere a ga-ahọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a na usoro na-butere:
Ọdịyo button a na-ahụ na-enwe iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe usoro-esonụ na nke a:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe N'ihi na mgbe ahụ nwetara site na-agbakwunye music si ndepụta na-egosi na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọ completes usoro na zuru:
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe ụzọ mee ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi n'ozuzu afọ ojuju larịị na mmekọrita ọdịyo mmịpụta ma ọ bụ music rip na eme ka ahụ n'aka na ihe kasị mma e nyere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na ndabere nke a. The media amịpụtara nwere ike dị ka iMovie oru ngo rụchaa usoro. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ aka na nke a na-enweta ihe a onye ọrụ chọrọ:
Site http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/ onye ọrụ kwesịrị ka ibudata na wụnye Wondershare Video convertor Ultimate na ẹkedori omume ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke usoro:
The videos ọdịyo mmịpụta site na nke a chọrọ ndị na-kwajuru iji jide n'aka na ihe kasị mma e soro na onye ọrụ ọkọkpọhi pụta na akara na-achọ n'aka na nke a:
Mmepụta format a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na mmịpụta e mere ya na nke a:
The tọghatara button a na-ahụ na-kụrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma pụta e site na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke usoro na ọ na-okokụre na ịke:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị-eso ụzọ File> Bubata mgbe mmalite na iMovie mbubata amịpụtara ọdịyo na rụchaa usoro na zuru:
4 ihe nwere mara banyere iMovie AVCHD
Olee otú mbubata M4V ka imovie
5 Atụmatụ maka iMovie 10 mkpa ka ị mara
Olee otú ịkọrọ iMovie video ka iCloud
Olee otú mbubata WMV ka iMovie
Olee otú ịtọ akụkụ ruru na Mac / iPhone / iPad
> Resource> iMovie> Olee ịgbakwunye music / songs ka iMovie on Mac / iPhone / iPad